သတင်း - အကောင်းဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းအရည်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံးအရည်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုအရိပ် ၄၀ ဖြင့်ရရှိသည်။ ပေါ့ပါး။ အဆီမပါသည့်ဖော်မြူလာသည်တစ်နေ့လုံးကြာရှည်ခံသည့်လှပသော Semi-Matte finish ကိုပြုလုပ်ရန်အသားအရေအတွင်းသို့ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ အရည်ဖော်မြူလာသည်မတူညီသောအသားအရေများနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်တောက်ပသောအသားအရေများကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။ အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောဤပေါ့ပါးသည့်ပုံသေနည်းသည်အသားအရေကိုကြည်လင်စေပြီးအရေပြားကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရာတွင်ဝက်ခြံနီခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဟေ့, အဆီပြန်အသားအရေအလှအပ! သတင်းကောင်းကိုစတင်ကြပါစို့ - အပိုပါ ၀ င်သောချောဆီကိုပါသောသူများသည်အရေးအကြောင်းများမှုနည်းပါးသောကြောင့်အရေပြားနှင့်သဘာဝနေရောင်ကာကွယ်မှုကိုခံယူထားသောချောချောမွေ့မွေ့သောအသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ထို့အပြင် - နှင်းခဲထဲမှာပါ! ဟုတ်ပြီ၊ အဲဒီမှာရှိတယ်
ဒါပေမယ့်အသားအရေလှပနေတဲ့သူတွေကတော့သင့်ထုတ်ကုန်ကိုပညာရှိရှိမရွေးပဲ Slide ဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်၊ မိတ်ကပ်ကိုလတ်ဆတ်ပြီးအရည်ပျော်မှုကင်းမဲ့အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းသည်အထူးသဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်လျှောကျခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထိုအခြေခံအလွှာသည်အခြားအရာအားလုံးကိုသေချာစွာအသုံးချသည်။ စိတ်ပျက်စရာ!
ထို့ကြောင့်သင့်အရေပြားအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရန်သင့်တွင်အသားအရေများများရှိပါကအလွန်အရေးကြီးသည်။ သင် Shine နှင့်ရုန်းကန်နေရသော်လည်း၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများကိုမည်သည့်အခါမှမကြိုးစားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။ အဲဒါဟာဂိမ်းအပြောင်းအလဲပါပဲ။
အဆင့် # ၁ - ဆီမွှေးလိမ်းရန်ပရီမီယံကိုသုံးပါ
အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်အသားတင်အမဲလိုက်ဖိုက်ခြင်းသည်အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မျက်နှာအတွက်စွမ်းအင်အပိုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ Blur + Pore Minimize တွင် Baby Skin Instant Pore Eraser နှင့် Face Studio Master Primer မိတ်ကပ်ဖွဲ့စည်းမှုသည်အပေါက်များကိုမမြင်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ တောက်ပမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးမိတ်ကပ်ကိုကြာရှည်ခံစေသည်။
အဆင့် # ၂ - ဆီအုန်းဆီရန်ပုံငွေလျှောက်ထားပါ
အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်သော Jinfuya Matte + Pore-less ဖောင်ဒေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဒီဆုရအလယ်အလတ်အကျယ်အ ၀ န်းဖောင်ဒေးရှင်းမှာလျှို့ဝှက်လက်နက်ပါ ၀ င်ပြီးသဘာဝအားဖြင့်ဆီစုပ်ယူနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် super-effect micro-powders များဖြင့်လည်းထုပ်ပိုးထားပြီးထွန်းလင်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အပြင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ကျန်ရှိခြင်းမရှိဘဲအပေါက်များ၏အသွင်အပြင်ကိုမှုန်ဝါးစေသည်။ ၎င်းသည်အသားအရေနှင့်တူပြီးအလွန်သဘာဝကျသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Jinfuya Shine-Free + Balance Stick ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်မှာအသားအရေချောမွတ်နေမယ်ဆိုရင် Stick ဖောင်ဒေးရှင်းကလှည့်စားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်ဤပေါ့ပါးသောအခြေခံအုတ်မြစ်တွင်အထူးတောက်ပမှုမရှိသောအမှုန့်များပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အတုံးတိုင်းနှင့်ဆီအပိုများကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Jinfuya Regimen Finder ကိရိယာနှင့်သင်၏ Jinfuya Foundation ၏အရိပ်ကိုရှာပါ။
# အဆင့် # ၃။ ဆီအခွံအတွက်အမှုန့်များထည့်ခြင်း
သင်အဆီပြန်သောအသားအရေရရှိထားလျှင်သင်၏အလှအပပစ္စည်းကိရိယာတွင်အမှုန့်များရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည် - ၎င်းသည်ချက်ချင်းလက်ငင်းအရောင်တောက်ပမှုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်! အားလုံးမဟုတ်တူညီဖန်တီးနေကြသည်မဟုတ်။
ဖိအားများသည့်အမှုန့်များနှင့်အချို့သောအမှုန့်များပါသောအရာများမှာများသောအားဖြင့်ဆီများဖြင့်တင်လေ့ရှိသည်။ သူတို့ကရေငတ်ပြေတာကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ပေမယ့်သင့်မိတ်ကပ်အရည်ပျော်ကျမှုမှာသူတို့ကတကယ်ပါဝင်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေး? မိတ်ကပ်အပေါ်တွင်အမှိုက်သရိုက်များနှင့်တစ်နေ့လုံး Shine-Free Oil Control Loose Powder သည်အသားအရေကိုလတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးနာရီပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးအမည်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ၁၀၀% ရေနံကင်းစင်သည်။